Orange ( 2015 ) - Myanmar Asian TV
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အားလုံးကို Orange Live Action လေးနဲ့ တင်ဆက်ပေးပါ့မယ် …
ကိုယ် ဂျပန် Live Action ကားတွေ ကို စကြိုက်ခဲ့တာ ဒီကားလေးကို ကြည့်ပြီးမှလို့ပြောရင်လဲ မမှားပါဘူး … Yamazaki Kento ကိုစကြိုက်ခဲ့တာလဲ ဒီကားမှာပါပဲ …
Anime ကြည့်ပြီးထားသူတွေအတွက်ကတော့ မစိမ်းပါဘူး … Live Action ရဲ့ သဘောအတိုင်း Anime ကိုတော့ နဲနဲချုံ့ရတာပေါ့ … မချုံ့ရင်လဲ ဇာတ်လမ်းကရှည်နေမှာပေါ့နော် …
အဲ့တော့ တချို့အခန်းလေးတွေက မြှုပ်ထားတော့ Anime ကြည့်ထားတဲ့လူမှ ပိုနားလည်မယ် ထင်မိတယ် …
အထက်တန်းကျောင်းစဖွင်တဲ့နေ့မှာ အသက် ၁၆ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ နဟို လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးဆီကို စာတစ်စာင်ရောက်လာခဲ့တယ် …
စာ ရဲ့ မျက်နှာစာမှာရေးထားတာက ” နဟို ဆီမှ ” တဲ့ သူနဲ့ထပ်တူကျနေတဲ့ နာမည်လေးကိုတွေ့ခဲ့တယ် …
အဲ့နေ့မှာပဲ ကျောင်းပြောင်းတစ်ယောက် ကျောင်းသားလာမယ် … အဲ့ကောင်လေး နာမည်က ခခဲရု လို့ခေါ်တယ် … အဲ့ကောင်လေးက နဟို ဘေးမှာ ထိုင်မယ် … အဲ့ဒါတွေကိုစာထဲမှာရေးထားတာ တွေ့ခဲ့ရပြီး အပြင်လက်တွေ့မှာလဲ တကယ် အဲ့လိုမျိုး ထပ်တူကျနေသွားတာကို နဟိုတစ်ယောက် အံ့အားသင့်နေခဲ့ရတယ် …
နောက်ပြီး စာထဲမှာ ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးသတိပေးထားတာ တစ်ခုရှိခဲ့တယ် … အဲ့ဒါကတော့ ဒီနေ့ ခခဲရု ကို လုံးဝအပြင်မခေါ်ပါနဲ့တဲ့ … နဟိုတို့ အဖွဲ့ထဲက စုဝ ဆိုတဲ့ကောင်လေးက ကျောင်းသားသစ်ဆိုတော့ ရင်းနှီးအောင် အပြင်ထွက်ဖို့ခေါ်ခဲ့တယ် … နဟို တို့ကလဲ ခခဲရုနဲ့ ရင်းနှီးသွားရင်း … ဒီန့ ခခဲရု ကို ခေါ်ခဲ့တာ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ် တွေးရင်း … စာထဲက အကြောင်းအရာကို မေ့လျော့လိုက်တယ်…
အမှန်တော့ အဲ့နေ့ခေါ်ခဲ့မိတဲ့ အကျိုးဆက်က သူတို့တွေအတွက် နောင်တ တစ်ခု ဖြစ်နေခဲ့တယ် ဆိုတာကို ၁၆ နှစ်အရွယ် နဟိုလေး က ၂၆နှစ် နဟို ရဲ့ စာကိုဖတ်ရင်း သဘောပေါက်ခဲ့တယ် …
အသက် ၂၆ နှစ် နဟို က လက်ရှိ အနာဂတ်မှာ ခခဲရု မရှိတော့ကြောင်း ပြောခဲ့တယ် …
အဲ့အတွက်လဲ ၁၆နှစ် နဟို ကို ခခဲရု ကို ကယ်ဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့တယ် …
ခခဲရု က အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုမရှိတော့တာလဲ ?
ဘာကြောင့်ဒီလို တွေဖြစ်ခဲ့ရတာလဲ ? ကို အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် နဟို တစ်ယောက် အဖြေရှာရင်း နဟို တို့ အဖွဲ့ ခခဲရု ကို ကယ်နိုင်ခဲ့လား ?
နောင်တတွေ ကိုကော ခြေဖျက်နိုင်ခဲ့လား ? ဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းလေးမှာ စီးမျောလိုက်ပါနော် …
Rating အရ IMDb မှာ 7.1/10 အထိ ရရှိထားခဲ့တယ့် Japanese Fantasy , Drama လေးပါ …
Actors: Dôri Sakurada, Hirona Yamazaki, Kento Yamazaki, Kurumi Shimizu, Ryo Ryusei, Shingo Tsurumi, Tao Tsuchiya
Openload.co Myanmar999 MB Download Soliddrive.co Myanmar999 MB Download
Trailer: Orange ( 2015 )